Charlie and the Chocolate Factory(2005) | MM Movie Store
ဝီလီဝနျကာဟာ အကောငျးဆုံး ခြောကလကျလုပျတဲ့လူပါ…သူရဲ့ သူမတူတဲ့ခြောကလကျလုပျနညျးတှကွေောငျ့ လူတိုငျးသူ့ခြောကလကျတှကေိုနှဈသကျခဲ့ကွတယျ။ ဆိုငျကလေးကနေ စကျရုံကွီး တညျထောငျနိုငျတဲ့အထိအကွီးအကယျြအောငျမွငျခဲ့တဲ့ ခြောကလကျလုပျတဲ့သူ ဖွဈခဲ့တယျ။
အောငျမွငျမှုတိုငျးမှာ တနျဖိုးဆိုတာ ရှိပါတယျ.ဒီလိုနဲ့ သူရဲ့ အကနြတှေ့ရေောကျလာခဲ့တယျ။ တခွား ခြောကလကျလုပျသူတှဟော ဝီလီရဲ့ နညျးတှကေိုသူလြှိုထညျပွီး ခိုးခဲ့ကွပါတယျ…ဝနျကာဟာ သိပျမကွာခငျမှာပဲခြောကလကျစကျရုံကို ထာဝရ ပိတျသိမျးလိုကျပါပွီလို့ကွညောခဲ့ပါတယျ..။
ထာဝရဆိုတာ…အခြိနျအကွာကွီးဆိုတာကို ပွောတဲ့ နာမျစားတဈခုပါပဲ…လူတှကေတော့ ထာဝရ ပိတျသှားပွီပဲထငျခဲ့ကွပါတယျ…စကျရုံထဲကခြောကလကျတှေ ထှကျမလာခငျအထိပေါ့…..။ပွနျမှေးဖှားလာတဲ့ဝနျကာရဲ့ စကျရုံနဲ့ အတူ ပဟဠေိတှေ ပျေါပေါကျခဲ့ပါတယျ…စကျရုံထဲမှာ ဘယျသူတှေ အလုပျလုပျနကွောတာလဲ….
မစ်စတာဝနျကာရော ဘာဖွဈသှားခဲ့တာလဲ….။စကျရုံတံခါးကွီးကတော့ ပိတျဆဲ..လူတှလေညျး အံ့သွမွဲ..တဈနမှေ့ာ တော့…နှဈပေါငျးမြားစှာ လူအဝငျမခံခဲ့တဲ့ သူရဲ့ ခြောကလကျစကျရုံကွီးထဲကိုဝငျဖို့ဖိတျချေါခဲ့ပါတယျ။ ဖိတျစာကတော့ ရှရေောငျ လကျမှတျ ၅စောငျ ဖွဈပွီးဒီ လကျမှတျတှကေို ခြောကလကျတှရေဲ့ အခှံအောကျမှာ ထညျ့သှငျးထားပါတယျ။
၅ယောကျထဲက တဈယောကျကိုလညျး အထူးဆု တဈခုပေးဦးမယျလို့ ပွောခဲ့တယျ။တဈကမ်ဘာလုံးက ကလေးတှေ… ဒီ လကျမှတျ ၅စောငျကို မရမက ရှာနတေဲ့အခြိနျ..မွို့အပွငျ အိမျအစုတျကလေးကခြာလီဆိုတဲ့ ကောငျလေးနဲ့ သူ့မိသားစုကတော့ရငျခုနျစှာနဲ့ပဲ ဘယျသူရသှားတယျဆိုတဲ့သတငျးတှကေို စောငျ့မြှျောနခေဲ့ရတယျ..။
မထငျမှတျပဲ ရှရေောငျ လကျမှတျတဈခုကို ရလိုကျတဲ့ ခြာလီကလေးဟာ….ဝနျကာရဲ့စကျရုံထဲ တခွားကလေး လေးယောကျနဲအတူ ဝငျခှငျ့ရခဲ့တယျ။ဝီလီဝနျကာရဲ့ ခြောကလကျစကျရုံထဲမှာ ဘာတှဖွေဈဦးမလဲအထူးဆု ဆိုတာရော ဘာလဲ။ဘယျသူ ရမှာလဲ။…ဒါတှကေိုစကျရုံထဲ ဝငျခှငျ့ရတဲ့ ကလေး၅ယောကျနဲ့အတူ လိုကျပါစီးမြောကွညျ့လိုကျပါ။
ဝီလီဝန်ကာဟာ အကောင်းဆုံး ချောကလက်လုပ်တဲ့လူပါ…သူရဲ့ သူမတူတဲ့ချောကလက်လုပ်နည်းတွေကြောင့် လူတိုင်းသူ့ချောကလက်တွေကိုနှစ်သက်ခဲ့ကြတယ်။ ဆိုင်ကလေးကနေ စက်ရုံကြီး တည်ထောင်နိုင်တဲ့အထိအကြီးအကျယ်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ချောကလက်လုပ်တဲ့သူ ဖြစ်ခဲ့တယ်။
အောင်မြင်မှုတိုင်းမှာ တန်ဖိုးဆိုတာ ရှိပါတယ်.ဒီလိုနဲ့ သူရဲ့ အကျနေ့တွေရောက်လာခဲ့တယ်။ တခြား ချောကလက်လုပ်သူတွေဟာ ဝီလီရဲ့ နည်းတွေကိုသူလျှိုထည်ပြီး ခိုးခဲ့ကြပါတယ်…ဝန်ကာဟာ သိပ်မကြာခင်မှာပဲချောကလက်စက်ရုံကို ထာဝရ ပိတ်သိမ်းလိုက်ပါပြီလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်..။
ထာဝရဆိုတာ…အချိန်အကြာကြီးဆိုတာကို ပြောတဲ့ နာမ်စားတစ်ခုပါပဲ…လူတွေကတော့ ထာဝရ ပိတ်သွားပြီပဲထင်ခဲ့ကြပါတယ်…စက်ရုံထဲကချောကလက်တွေ ထွက်မလာခင်အထိပေါ့…..။ပြန်မွေးဖွားလာတဲ့ဝန်ကာရဲ့ စက်ရုံနဲ့ အတူ ပဟေဠိတွေ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်…စက်ရုံထဲမှာ ဘယ်သူတွေ အလုပ်လုပ်နေကြာတာလဲ….
မစ္စတာဝန်ကာရော ဘာဖြစ်သွားခဲ့တာလဲ….။စက်ရုံတံခါးကြီးကတော့ ပိတ်ဆဲ..လူတွေလည်း အံ့သြမြဲ..တစ်နေ့မှာ တော့…နှစ်ပေါင်းများစွာ လူအဝင်မခံခဲ့တဲ့ သူရဲ့ ချောကလက်စက်ရုံကြီးထဲကိုဝင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ဖိတ်စာကတော့ ရွှေရောင် လက်မှတ် ၅စောင် ဖြစ်ပြီးဒီ လက်မှတ်တွေကို ချောကလက်တွေရဲ့ အခွံအောက်မှာ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။
၅ယောက်ထဲက တစ်ယောက်ကိုလည်း အထူးဆု တစ်ခုပေးဦးမယ်လို့ ပြောခဲ့တယ်။တစ်ကမ္ဘာလုံးက ကလေးတွေ… ဒီ လက်မှတ် ၅စောင်ကို မရမက ရှာနေတဲ့အချိန်..မြို့အပြင် အိမ်အစုတ်ကလေးကချာလီဆိုတဲ့ ကောင်လေးနဲ့ သူ့မိသားစုကတော့ရင်ခုန်စွာနဲ့ပဲ ဘယ်သူရသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကို စောင့်မျှော်နေခဲ့ရတယ်..။
မထင်မှတ်ပဲ ရွှေရောင် လက်မှတ်တစ်ခုကို ရလိုက်တဲ့ ချာလီကလေးဟာ….ဝန်ကာရဲ့စက်ရုံထဲ တခြားကလေး လေးယောက်နဲအတူ ဝင်ခွင့်ရခဲ့တယ်။ဝီလီဝန်ကာရဲ့ ချောကလက်စက်ရုံထဲမှာ ဘာတွေဖြစ်ဦးမလဲအထူးဆု ဆိုတာရော ဘာလဲ။ဘယ်သူ ရမှာလဲ။…ဒါတွေကိုစက်ရုံထဲ ဝင်ခွင့်ရတဲ့ ကလေး၅ယောက်နဲ့အတူ လိုက်ပါစီးမျောကြည့်လိုက်ပါ။